पाकिस्तानमा कार्यरत २०० चिनियाँ नागरिक डेंगूबाट प्रभावित
एजेन्सी । पाकिस्तानको परमाणु उर्जा संयन्त्रमा काम गर्ने २०० चिनियाँ नागरिक डेंगूबाट प्रभावित भएको पाकिस्तानी मिडियाले जनाएको छन । गत शनिबार आएको मेडिकल रिपाेर्ट अनुसार, उनीहरुलाई डेंगू भएको पुष्टि गर...
काठमाडौं । सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् ...
काठमाडौं । लामखुट्ट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोग काठमाण्डू उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखा परेको छ । डेङ्गु भाइरसका कारण हुने उक्त रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिन सक्ने हुँदा तत्काल सतर्कता अपनाइन...
काठमाडौँ । पानीका स्रोत र मुहान प्रदूषित हुँदा दुर्लभ गाइने किरा सङ्कटमा परेको छ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरी भेग र नेपालको पूर्वी भेगमा पाइने ‘रिलिक्ट हिमालयन ड्र्यागन फ्लार्ई’ नामक गाइने कि...
कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनगरी कारागार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको ...
काठमाडौँ । छुचुन्द्रो विश्वभर नै पाइन्छ । हालसम्म छुचुन्द्रोका ३० प्रजातिको बारेमा अध्ययन गरिएको छ । छुचुन्द्रो मुसा जस्तै लामो थुतुनो भएको प्राणी हो । जसलाई हिन्दु धर्मअनुसार गणेशको वाहनको रूपमा लिइन...
काभ्रे वाङ्थलीका विष्णु खड्काले ख्याल-ख्यालमै भने -‘मोटरसाइकल चढ्नुपर्ने। मिर्गौला किन्ने कोही छैन ? भन है साथी हो।’ उनले यसो भनेपछि मिर्गौला तस्कर सम्पर्कमा आइहाले। तस्करसँग सम्पर्क गराउनेमध्ये एक थ...
"सानो-सानो ताउलीमा दुई कुड्की भात बाहिरपट्टि बाक्ला काँडा घोच्ला तिम्रो हात, के हो ?" यो गाउँखाने कथाको उत्तर हो- कटुस । कटुस खान योग्य फल लाग्ने रूख वर्गमा पर्ने वनस्पति हो । कटुस फुलेको समय वातावर...